Lahatsary: Tsy Misy Dobo? Tsy Olana! Misy Ny Vahaolana Iadiana Amin’ny Hafanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Aogositra 2012 12:15 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, русский, Français, Filipino, Español, 日本語, বাংলা, English
Manery ireo olona marobe hitady fomba ialàna amin'ny fiakaran'ny maripàna na hitady fomba hahazoana aina ny tonontaona mafàna ao amin'ny ilam-bolantany avaratra. Mampiseho ny fomba famoronana sy ny fomba tsotra nataon'ny ireo tanora sy lehibe hoentina hiadiana amin'ny hafanana ireto sary sy lahatsary manaraka ireto.
Miady amin'ny hafanana amin'ny alalan'ny famenoana rano anaty kianja (lavaka) fanaovana korisa “skate” ny ankizy ao Medellín Kolombia ary maka hatsiaka ao anatin ‘izany. Ao anatin'ny foto-drafitrasa tantanin'ny orinasam-pitanterana ilay kianja fikorisarisana. Diego Alzate no naka ny sary nandritra ny fialantsasatra nataony tao Kolombia tamin'ny volana Jolay 2012 lasa teo; nahazoana alalana avy aminy ny fandefasana ny sary.
Fenoin'ireo ankizy rano ny kianja (lavaka) fanaovana korisa “skate” mba ho lasa dobo filomanosana ho azy ireo ao Medellin, Kolombia, sarin'i Diego Alzate, nahazoan-dalana
Ao Hong Kong, milalao ao anaty loharano ao amin'ny zaridainan'i Hong Kong ny ankizy mba hitady hatsiaka.
Ao Siloé tanàna manodidina an'i Cali, Kolombia, nanapa-kevitra ny hanova ny fanaovana teatira ankalamanjana ho dobo filomanosana ny ankizy.
Mety avy amin'ny toerana somary kely ihany koa ny vahaolana noho ny hafanana: ao amin'ny Repoblika Dominikana ohatra, namaha olana ilay dobo kely fisasana.
Ity fitoeran-drano somary lehibe tahaka ny fitaovana an-dakozia fampiasa taloha ela be: amin'izao fiainam-baovaony izao, nanjary lasa dobo filomanosana kely ho anà zazavavy anankiroa ao Brezila ilay izy
Inona kosa no atao raha mihitsoka any an-trano na anaty birao ianao kanefa tsy manana milina fanitsiana hafanana? Tadidio ity fomba fanao taloha ity, apetraka aorian'ny vonga-dranomandry ny vantilatera.
Ahoana ny fomba hiadianao amin'ny hafanana?